नेपाल आज | रामशरण महतले नभाँडेको भए मेलम्ची १५ वर्षअघि नै आइसक्थ्यो
रामशरण महतले नभाँडेको भए मेलम्ची १५ वर्षअघि नै आइसक्थ्यो
शनिबार, २५ जेठ २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
२००७ सालपछि भारतीयहरुको दबाबमा रहन बाध्य भएको नेपाल हालसम्म पनि नेपाली नेताहरुको कमजोरीका कारण उनीहरुकै स्वार्थमा हामी चलिरहेका छौं । २०४६ सालपछि आएको बहुुदलीय व्यबस्थापछि पनि बिदेशीको गुुलामी गर्न छोडेका छैनौं ।
त्यसैको फलस्वरुप हाम्रा राष्ट्रिय महत्वका बिषयहरु पनि आफ्नो हितमा निर्णय नगरी बिदेशीका हितमा निर्णय गर्दै आएका छौं । १९९८ तिर मेलेम्ची खानेपानी योजना चाइनीजहरुले बनाउने गरी ठेक्कापट्टा भइसकेको रहेछ । शेरबहादुुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा ५ बर्षभित्रमा सम्पन्न हुुनेगरी २००४ मा सुुन्दरीजलमा पानी खसाल्ने सम्झौता भएकोमा त्यतिखेर नेपालका अर्थमन्त्रीको दबाबमा काम अघि बढ्न दिइएन । वर्ल्ड बैंकको जागिरबाट भर्खर आएका त्यतिखेरका अर्थमन्त्रीलाई बिदेशीको दबाबमा उक्त ठेक्कापट्टा रद्द गरिएछ । त्यतिखेर वल्ड बैंकमा नेपाल बिरोधी केहि तत्वहरुको दबाबमा चीनलाई काम गर्न दिइएन । अहिलेसम्म काठमाडौवासी मेलेम्चीको पर्खाइमा बस्नुपरेको छ । शायद इमान्दार देशप्रति समर्पीत बिदेशीसँंग नझुक्ने नेतृत्व भएको भए हामीले धेरै पहिला मेलेम्चीको पानी पिउने सौभाग्य पाउने थियौं ।
अरुण ३ बनाउन वर्ल्ड बैंकले सहयोग गर्न तयार रहेको अवस्थामा तत्कालिन एमाले महसचिब माधबकुुमार नेपालले पत्र लेखेर वर्ल्र्ड बैंकको सहायता रोकिदिए । जसको फलस्वरुप नेपाल लामो समयसम्म लोडसेडिङमा बस्नु प¥यो । अहिलेसम्म भाारतबाट बिजुुली आयात गरिरहनुु परेको छ । यसमा भारतीयहरुको दबाब भएको कुुरा प्रायः सबै जानकार छन् । नेताहरुको काम जनताको हितमा काम गर्ने हो नकि बिदेशीको हितमा ।
टनकपुुर बाँधको बिरोध गर्ने एमालेले त्यतिखेर भारतको हितमा महाकाली सन्धि ग¥यो । तर अहिलेसम्म भारतले सन्धिअनुुसार कारबाही अघि बढाएको छैन । कोशी र गण्डकीमा गरेको एतिहासिक भूल हामी कहिल्यै नभुुलौ । जुुन आयोजनाहरुबाट नेपालको हजारौं बीघा भूमि डुुबानमा परेर पनि हाम्रा खेतहरुमा सिचाइँ नभएर बाँझा रहेका छन् । सुुनकोशी मरिन् डाइबर्सनको कुुरा भरखर अघि बढ्दैछ तर यस्मापनि भारतीय दबाब आउनसक्छ ।
त्यस्कालागि नेतृत्व फितलो होइन बलियो हुुन आवश्यक छ । हाम्रा नेता अझै पनि भारतीय नेतृत्वलाई चाकडी गर्न र सत्तामा जाने बाटो बनाउन खोज्छन् । नत्रभने पार्टीभित्रका बहसहरु पार्टीभित्र मिलाउनुु पर्नेमा एकपटक मिडियामा गएर प्रचारबाजी गर्नुको अर्थ के हो ? भारतीय प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा दिल्ली जान तयार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सरकारको म्याद सकिन लाग्यो भनेर मिडियामार्फत थर्काउनुुको अर्थ के हो ? सिर्फ भारतीय नेताहरुलाई ‘भविष्यमा म प्रधानमन्त्री हुुंँदैछुु मलाइ सहयोग गर केपीलाई होइन’ भनेर बिगुल फुुक्नुुको अर्थ उनीहरुको चाकडी नै हो ।
यस्ता गतिबिधिले नेपालका दलहरुको आन्तरिक समस्या चर्किन्छ जुुनकुुरा भारतीयहरुले चाहन्छन् । खुुला सिमाना व्यवस्थीत गर्न इपिजिको सुुझाब अहिलेसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हेरेका पनि छैनन् । कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने नगर्ने कुरा धेरै टाढाको छ । कालापानी र सुस्ताको बिवादमा हाम्रो आवाज कमजोर बन्नुहुुँंदैन । ती सबै बिषयहरुमा सबै नेताको एउटै बोली नभएसम्म हामीलाई बिदेशीको दबाब परिरहन्छ । प्रचण्डलाई सत्तामा जान हतारो भनेको माओबादी द्वन्द्वको समयमा भएका ठूलाठूला मानवअधिकार उलंघनका घटनामा आफू मुुछिएको बिषयमा आफूलाई सफाइ लिन हतारो छ । जुुनकुुरा शक्तिराष्ट्रहरुले बुुझेका छन् । त्यसैको फाइदा लिन उनीहरुले बिभिन्न दबाब दिएर आफ्नो स्वार्थमा निर्णय गराउन सक्नेछन् । त्यहि भएर हाल नेपालमा धर्मनिरपेक्षको नाममा क्रिष्चियन धर्मको प्रचार व्यापक रुपमा भइरुहेको छ । कालन्तरमा यसले नेपाललाई धार्मिक समस्य पैदा गर्नेछ ।
अर्कोतर्फ भारतीय प्रधानमन्त्री झनै शक्तिशाली भएर आएका छन् । उनको उद्देश्य भनेको नेपाल संसारभरका हिन्दुहरुको शीर भएर बसोस् जसको लागि नेपालमा पहिलाजस्तै हिन्दुुराष्ट्र रहोस् भन्ने चाहन्छन् । कमसेकम संबिधान संसोधन गरेर भए पनि धर्मनिरपेक्षको स्थानमा धार्मिक स्वतन्त्रता राखियोस् भन्ने चाहन्छन् । यो मोदीको मात्र चाहना होइन नेपालका ९४ प्रतिशत ओमकार परिवारको चाहना हो । धर्म निरपेक्ष नेपालीको चाहनाभन्दा पनि अमेरिका, पश्चिमा राष्ट्र र काँग्रेस आइको दबाबमा आएको हो भन्ने बुुझाइ धेरै नेपालीको छ । यदि मोदीको यति भनाइ मान्दा नेपालको पनि हित हुुन्छ भन्ने त्यसतर्फ शासकहरुले सोच्दा राम्रै हुुन्छ ।
हामी धार्मिकरुपमा पनि बढी सुुुरक्षित रहने छौं । किनकि हामी सम्पूर्ण नेपालीले सनातनदेखि मान्दै आएका परंपरा रितिरिवाज चाडपर्ब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा सबै नेपालीले मान्दै आएका छन् । हिन्दुमात्र होइन नेपालमा बस्ने मुुस्लिम समुुदायले पनि नेपाल हिन्दुुराष्ट्र हुँदा आफूहरु बढी सुरक्षित हुुनेकुरा भनिसकेका छन् । देश बढी सुरक्षित शान्त र बलियो सरकार भएमामात्र देशले अग्रगामी प्रगति गर्नसक्छ ।
देश बिकास गर्न पनि नेतृत्व इमान्दार जनताप्रति समर्पीत हुुनैपर्छ । बिदेशीसँंग साँंठगांँठ गरेर सत्ताको तर मार्न खोज्ने हो भने उनीहरुको स्वार्थ पूरा गर्नुुपर्छ जुुन देशको हितमा हुुँंदैन । देशका सीमा मिचिएका छन् , सिमानामा सडक पुल बनेका छन् जसको कारणबाट नेपालका जमिन जलमग्न भएका छन् । यस्ता राष्ट्रिय महत्वका बिषयमा तथा भ्रष्टाचारका बिरुद्धमा प्रधानमन्त्रीलाई झकझक्याउनुु पर्नेमा उनै प्रधानमन्त्रीको तेजोबध गर्न लागेमा प्रचण्डको पनि यस तरिकाबाट हित हुुनेछैन । भ्रष्टाचारमा देश चुर्लुुम्म डुुबेको छ ।
मन्त्री सचिबहरु नीतिगत भ्रष्टाचारमा डुुबेका छन् । उनीहरुलाई कारबाही गर्न अग्रसर हुुनुुपर्छ । असक्षम र कमजोर मन्त्रीहरुलाई हटाएर सक्षम र इमान्दार व्यक्तिहरुलाई मन्त्रीमण्डलमा ल्याइनुुपर्छ । पार्टीको आन्तरिक समस्या बाहिर ल्याएर बिदेशीलाई खुुसीपार्ने काम अब बन्द गरौं । देशको हितमा हुने कार्य आफै निर्णय गरौं । नेपालको बिकासभन्दा बिदेशीको हितको लागि आएका आइएनजिओहरु हटाऔं जसले जनचेतनाको नाममा क्रिष्चियन धर्मलाई जर्बजस्ती मलजल गरिरहेका छन् । यस्को दीर्घकालिन नकारात्मक प्रभाव समाजमा पर्नेछ । नेताहरु पहिला आफैं सचेत र होसियार बनौं जनता अब धेरै सचेत भइसकेका छन् ।